Tinokupai bhuku redu rekudzidza reGerman, iro ratakagadzirira avo vanoda kudzidza ChiGerman vari vega, avo vasingataure chiGerman, uye avo vari kutanga kudzidza chiGerman. Unogona kushandisa nyore nyore bhuku redu reGerman, ratakaronga seE-Book, pakombuta yako kana pafoni yako.
Yedu yeGerman bhuku rekuverenga ibhuku rekuwedzera revadzidzi vezvikoro zvepamusoro uye bhuku rekuGerman rekudzidza kwevanotanga kudzidza chiGerman.
Bhuku redu reGerman rakanzi Wir lernen Deutsch (WLD) rinogona kushandiswa neavo vanoda kudzidza ChiGerman vari vega, uye rinogona kushandiswa senge rekuwedzera bhuku reGerman revadzidzi vegiredhi re9, rinogona zvakare kushandiswa senge bhuku reGerman revadzidzi vegiredhi regumi nekuti rinosanganisira gumi giredhi zvidzidzo. Iyo inogona kutoshandiswa sechinhu chinobatsira kwazvo uye chinodzidzisa chevadzidzi vegiredhi regumi neregumi nemaviri negurombo reGerman.
Avo vasingaendi chero chikoro kana chero kosi yeGerman vanogona kushandisa bhuku redu rekuGerman kudzidza kudzidza chiGerman voga. Bhuku redu rakagadzirwa nevanhu vasingataure chero chiGerman mupfungwa uye zvidzidzo zveGerman zvinotanga kubva pakutanga. Nekudaro, avo vatsva pakudzidza chiGerman kana avo vasingazive chero chiGerman vachakwanisa kudzidza nyore chiGerman kubva mubhuku redu.
ZVIRI MUKATI PEDU BHAIBHERI REDU GERMAN
BHUKU REDU REKUDZIDZA KWEGERMAN RINOGONESESA NEZVINHU ZVESE ZVENYANYA ZVEMAOKO, MABHUKU NEOMAKOMPUTA
chiGiriki bhukuchidzidzo chechi Germanbhuku rekudzidza chiGermanwega kudzidza bhuku reGerman